IMorocco igqemeke engeqiwa ntwala - Bayede News
IMorocco igqemeke engeqiwa ntwala
Likhula mawala ikhwelo lokubuyisela eyeshashalazi emalokishini
IMorocco igqemeke engeqiwa ntwala emveni kokuba iNkantolo ye-Europe Union ithathe isinqumo esithi isivumelwano sohwebo phakathi kwayo namazwe ayingxenye ye-European Union (EU) asikho emthethweni.
Ingqikithi yalesi sinqumo yisivumelwano ebesikhona phakathi kwaleli lizwe ne-EU ebesigunyaza amazwe ase-Europe ukuba akwazi ukudoba ogwini oluqaqele iMorocco nokwadala inkinga ngenxa yokuthi sabe sihlanganisa nesifundazwe iWestern Sahara.
NgokweMorocco ne-EU lesi sivumelwano sabe sisemthethweni ngoba ngokwabo iWestern Sahara iyingxenye yeMorocco, kepha, ngasohlangothini lweqembu iPolisario Front, lesi sivumelwano sabe siphula umthetho ngoba ugu oluseduze nalesi sifundazwe akumele luthathwe njengengxenye yeMorocco, ngakho-ke leli lizwe alikwazi ukwenza izivumelwane namanye amazwe ezifaka lesi sifundazwe.
IPolisario Front, nokuyiqembu elisalwela inkululeko yeWestern Sahara, besekuphele iminyaka likhalazela futhi ligxeka elaseMorocco ne-EU ngesivumelwano abanaso. Lase liqale imikhankaso eminingi yokufaka leli lizwe engcindezini nokuzama ukuthola ukwesekwa ngamanye amazwe kulokhu ebelithi wukuvikela ubulungiswa kweyokuphathwa kwamazwe omhlaba. Ekukhankaseni kwayo iPolisaro yagcina ifake icala kule Nkantolo ukuba kube yiyo enqumayo ngalesi sivumelwano nebeliphikiswa yiMorocco kanye ne-European Council okuwumgwamanda osebenzela nophatha izindaba zamazwe angamalungu e-EU.
Yethula isinqumo sayo le Nkantolo ithe iPolisario Front “ithathwa futhi seyamukelwa emhlabeni jikelele njengommeleli wabantu baseWestern Sahara,”, yaphinde yathi i-EU mhlazane yenza lesi sivumelwano sokudoba ogwini oluseduze naleli lizwe “ayizange yaqinisekisa ukuthi ithola imvume yabantu baseWestern Sahara ngaphambi kokuba yenze lesi sivumelwano neMorocco”. Isinqumo esinjengalesi singathathwa ngesizoba nomthelela ohlangothini lwezepolitiki nakwezomnotho.
Ngakwezepolitiki, lesi sinqumo siqinisa umgogodla wePolisario Front ngoba ngesigcizelela ukuthi iyiqembu ‘elisemthethweni’ nelingakwazi ‘ukumela’ nokuba ‘yiso’ lezakhamuzi zaseWestern Sahara. Lokhu kumiswa kwePolisario Front njengeqembu elisemthethweni kuyinto iMorocco engayivumi ngoba emikhankasweni yayo yokuthi iWestern Sahara iyingxenye yeMorocco livame ukubeka iPolisario Front njengabavukeli mbuso okungamele bathathwe njengabameli abasemthethweni.
Ukuthathwa njengeqembu elisemthethweni yile Nkantolo kuzokwandisa amathuba okuthi iPolisario Front iqhubeke nokufaka ingcindezi kumazwe amaningi, ikakhulukazi awase-Europe ukuba ake alubheke ngamanye amehlo udaba lwenkululeko yeWestern Sahara nosekuphele iminyaka izama ukulibeka ezithebeni zamazwe omhlaba.
Kepha kungasohlangothini lwezomnotho lapho iMorocco ne-EU belimale khona kakhulu ngalesi sinqumo. I-EU yiyo ehamba phambili kwezohwebo eMorocco iphinde ibe umtshalizimali ovelele kuleli lizwe okuyenza ibaluleke kakhulu kubudlelwano leli lizwe elinabo namanye amazwe. Okukhulu kakhulu wukuthi, emveni kwalesi sinqumo esichithe lesi sivumelwano sokudoba kulindeleke ukuthi iMorocco ilahlekelwe ama-Euro ayizigidi ezingama-52 minyaka yonke kuze kufinyelele eminyakeni emine ezayo.
Lesi sivumelwano besizovumela imikhumbi eli-128 evela emazweni ali-11 angamalungu e-EU ukuthi adobe ogwini oluseduze neMorocco. Ukulahlekelwa kwamazwe angamalungu e-EU okufana nalokhu ngakwezomnotho ‘kuzowaphoqa’ ukuthi abuyele etafuleni acubungule kahle ukuthi maqhinga mani angeza nawo angadala ukuthi angalahlekelwa ungunaphakade, nokuyinto engeke ibe lula.
INjeje igxeka ukuhlaselwa kukaMgiliji eyoseka uMsholozi eNkandla
Uma engase anqume ukuxoxisana nePolisario Front ukuze isivumelwano kube ngesisemthethweni, azobe ebeka engcupheni ubudlelwano bawo neMorocco, nobubalulekile, nokuyinto engaqinisa ingxabano phakathi kwawo ngoba akhona angeke avume ukuthi leli qembu linikezwe amandla anjengalawo. Uma engasishayi ndiva isinqumo seNkantolo noma ezama ukusiphikisa, azidalela inkinga ezoqinisa imibono ethi, amazwe aseNyakatho akuwona ahlonipha amalungelo nemithetho emisiwe elawula ubudlelwane phakathi kwamazwe omhlaba.
Lesi sinqumo sivuse umhlwenga kuPolisario Front nobesekubonakala ukuthi idlela ogageni kweyokulwela inkululeko yeWestern Sahara ngenxa yobuhlakani beMorocco ekwakheni nokuqinisa ubudlelwane namazwe amaningi nalapho ibiqinisekisa ukuthi eyalesifundazwe ingashaywa ndiva.
Kuzokhunjulwa ukuthi nyakenye, iMorocco yathola ukwesekwa okukhulu mhlazane owayenguMengameli wase-United States of America (USA) uMnu uDonald Trump ememezela ukuthi uHulumeni wakhe uyayeseka iMorocco ekutheni iWestern Sahara iyingxenye yayo. Lesi sinqumo siphume nangesikhathi lapho iMorocco ibhekene ngeziqu zamehlo ne-Algeria engumakhelwane neseka kakhulu iPolisario Front nalapho i-Algeria ibisizithola sengathi imi yodwa kweyenkululeko yalesi sifundazwe.
Ngaleyo ndlela lesi ngesinye sezinqumo esisazoba nomthelela obanzi ezingqinambeni nemizamo ekhona kweyokuthola isisombululo kweyaseWestern Sahara, kepha okwamanje sibonakala njengesitakule iPolosario Front ebunzimeni ebisibhekene nabo bokuthi kwande inani lamazwe abangasayithathi njengeqembu elingamela loludaba.
nguSenzo Ngubane Oct 8, 2021